रसियालाई हराउँदै क्रोएशिया २० वर्षपछि विश्वकपको सेमिफाइनलमा
काठमाडौं । आयोजक राष्ट्र रसियालाई हराउँदै क्रोएशिया सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शनिबार राति सम्पन्न खेलमा क्रोएशियाले रसियालाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराएको हो ।
गृहमैदानमा रसियाकाे रक्षापंक्ति ताेड्नुपर्ने क्राेएशियाकाे चुनाैती
मस्को । विश्वकप २०१८ को आयोजक राष्ट्र रूस र पूर्वी युरोपियन मुलुक क्रोएशिया क्वार्टरफाइन चरणको अन्तिम खेलमा आज भिड्दैछन् । यो खेलबाट विश्वकपको सेमिफाइनल चरणमा पुग्ने चौथो टोलीको टुंगो लाग्नेछ ।
विश्वकपको क्वार्टरफाइनल खेल्ने टिमको टुंगो लाग्यो, कुन खेल कहिले ?
काठमाडौं । रसिया विश्वकपमा ८ राष्ट्रले क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाएका छन् । विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा उरुग्वेले पोर्चुगललाई २–१ गोलले, फ्रान्सले अर्जेन्टिनालाई ४–३ गोलले, रसियाले स्पेनलाई पेनाल्टी सुट
स्पेनमाथि ऐतिहासिक जित हातपारेपछि रसियामा खुशीयाली
मस्को । रुसको राजधानी मस्कोमा जारी विश्वकप फुटबलमा आइतबार स्पेन र रुसबीच भएको खेलमा रुस विजयी भएपछि रुसभरि खुशियाली छाएको खबर छ ।
यस्तो छ विश्वकपमा दुई गोल गर्ने खेलाडीहरुको सुची
काठमाडौँ । रसियामा जारी विश्वकपमा हालसम्म १३६ गोल भइसकेको छ ।
विश्वकपमा पहिलो पटक ४ जना बैकल्पिक खेलाडी पठाउने टोली रसिया
काठमाडौं । विश्वकपमा पहिलो पटक रसियाले एकै खेलमा ४ जना खेलाडीलाई सब्सिच्युट (वैकल्पिक खेलाडी) गरेको छ । खेलको नियमित समयमा दुवै पक्षबाट १–१ गोल भएपछि खेल अतिरिक्त समयमा लम्बिएको थियो ।
विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा रुसले पायो क्रोएशिया प्रतिद्धन्द्धी
काठमाडौं । रसिया विश्वकपको क्वार्टरफाइनलको नयाँ समिकरणमा आयोजक राष्ट्र रुसले क्रोएशिया प्रतिद्धन्द्धी पाएको छ । रुसले स्पेनलाई तथा क्रोएशियाले डेनमार्कलाई हराउँदै क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाएको हो ।
पेनाल्टीमा स्पेनलाई पराजित गर्दै आयोजक राष्ट्र रसिया विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा
काठमाडौं । पेनाल्टीमा स्पेनलाई हराउँदै विश्वकपको आयोजक राष्ट्र रसिया क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । आइतबार राति लुज्निकी रंगशालमा सम्पन्न खेलको नियमित समयमा दुवै पक्षबाट १–१ गोल मात्रै भएको कारणले गर्दा खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो ।
बल पोसेसन राख्न माहिर स्पेनले रसियाविरुद्ध कस्तो खेल्ला ?
काठमाडौं । आज विश्वकपको अन्तिम १६ मा समूह ‘बी’ को विजेता राष्ट्र स्पेन र समूह ‘ए’ को उपविजेता तथा आयोजक राष्ट्र रसियाबीच क्वार्टरफाइनल प्रवेशको लागि भिडन्त हुँदैछ ।
विश्वकपको अन्तिम १६ मा आज दुई खेलहरु हुँदै
काठमाडौं । विश्वकपको नकआउट चरणमा आज पनि दुई महत्वपूर्ण खेलहरु हुँदैछन् । आज राति हुने पहिलो खेलमा स्पेनविरुद्ध आयोजक रसिया मैदानमा उत्रनेछ । लुज्निकी रंगशालमा बेलुकी पौने ८ बजे सुरु हुने खेलमा दुई राष्ट्रमध्ये एक राष्ट्र क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गर्नेछ भने एक राष्ट्रको यात्रा समाप्त हुनेछ ।